Categories News Tags Babes noMampintsha
I-Afrika Day III
Umlando wethu uma singawubungazi ngendlela yethu siphinde silobe ngawo, bakhona abazokwenza lokho umehluko nje ukuthi uzobe usunongiwe ungasesilo iqiniso. Ingakho kubalulekile ukuthi kuhlezi kukhulunywa futhi kwenziwa imigubho ukukhumbula izinsuku ezifana nayo i-Afrika Day ukukhombisa la esisuka khona ukuthi inde kangakanani indlela esihanjiwe nokuthi kusekude kangakanani la esiya khona ngoba phela lisephansi igeja. Sikuvezile kulawa amanye … Read more
Categories History, News Tags Afrika Day III
Usayimbe ngqi iGqomu uDJ Lag
ULwazi Asanda Gwala odume ngelikaDJ Lag unguDJ aphinde abe ngumdidiyeli wamarekhodi aseThekwini osezinze phesheya e-United Kingdom (UK) ngenxa yomsebenzi. uDJ Lag ozalwe elokishini lase-Clermont uthathwa njengenkosi yomculo weGqomu, ungomunye wabantu ababambe iqhaza elikhulu ukuvula indlela emkhakheni wolo mculo kusukela uqala ngo-2010. Usayimbe ngqi kulomkhakha weGqom’ uDJ Lag yize abantu abaningi bebengabaza ukuthi lisazoqhubeka yini isasasa … Read more
Categories Music, People Tags DJ Lag, Gqomu music, Lwazi Asanda Gwala
Noma izinto zesintu eziningi ezibandakanya amasiko akwaZulu zihleze zenzelwa emehlweni abantu , njengayo imigubho kanye nemibungazo akusikhona konke okuvezelwa abantu, okunye kuba izinto eziyimfihlo yasekhaya ngokwehlukana kwemizi. Ingakho ke nje kunendida mayelana nokukhothama kwamakhosi akwaZulu kanye nemininingwano ngokufihla kwawo ngoba phela khona akufani nokufihla umuntukazana, ongesiyena owasebukhosini. Nasemlandweni siyathola ukuthi namanje kalaziwa ithuna leNdlovukazi yaMageba … Read more
Seliphinde lasigubezela ifu elimnyama thina bathandi bomculo wesintu sakithi KwaZulu uMaskandi njengoba sekudlule iqhawe ebelidume kakhulu ngengoma yalo emnandi. Lapha sikhuluma ngomfoka Zungu uMajotha, obedume kakhulu ngokuzibiza Ngendlabeyiphika yangampela. Kungena izindaba zokuhamba kwalensizwa nje emhlabeni bekade sisanda kuzwa ngodaba lokungena engozini yomgwaqo kwentokazi ebizwa ngoNdoni ekuyo lendima kaMaskandi kanye noAli Mgube bona ababe nenhlanhla yokuthi … Read more